गूगल म्याप्समा सडकको बारेमा आफ्नैले लेख्न सकिने, थाहा नभएको सडकको जानकारी दिन पाईने - Technology Khabar
» गूगल म्याप्समा सडकको बारेमा आफ्नैले लेख्न सकिने, थाहा नभएको सडकको जानकारी दिन पाईने
गूगल म्याप्समा सडकको बारेमा आफ्नैले लेख्न सकिने, थाहा नभएको सडकको जानकारी दिन पाईने
अब प्रयोगकर्ताहरूले गुगल म्याप्समा नयाँ सेवा पाउनेछन्। यस सेवाका कारण प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो म्याप्समा नयाँ रुटहरू समेत थप्न सक्नेछन् जुन उनीहरूको यात्राको क्रममा तय भएको मार्गको हिस्सा छैनन्।
यसका लागि कम्पनीले नयाँ सडक सम्पादन टूल प्रदान गरेको छ। यस उपकरणको सहयोगमा, तपाईं म्याप कोर्दै अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ।
गुगल म्याप्सलाई अझै राम्रो बनाउन गुगलले नयाँ फिचर ल्याएको हो ।
गुगलले ८० भन्दा बढी देशहरूमा यसको म्याप्सको अनुभव सुधार गर्न सम्पादन सुविधाहरू प्रदान गरेको छ। अब प्रयोगकर्ताहरूले यसमा हराइरहेका सडक थप्न सक्छन् र गलत नाम हटाउन वा म्याप्समा नाम परिवर्तन गरेर आफैंले सहि नाम राख्न सक्दछन्।
गुगलले हरेक देशका स्थानिय व्यवसायहरुमा रिभ्यू गर्नका लागी प्रोत्साहित गरिरहेको छ । यसले अरुलाई पनि त्यो ठाउँ कस्तो छ भनेर जानकारी लिन मद्दत पुर्याउँछ ।
यो फिचरलाई गूगलले लोकल लभ च्यालेन्जको नाम दिएको छ र एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले यसलाई अर्को महिना देखि प्रयोग गर्न पनि पाउनेछन् । यसमा स्टोर खुल्ने र बन्द गर्ने समय पनि अपडेट गर्न सकिन्छ ।
गूगलको अर्को नयाँ फिचरले गर्दा म्याप्समा कुनै ठाउँको फोटो पनि अपडेट गर्न मिल्छ । त्यसमा फोटो सहित छोटो टेक्स्ट पनि लेख्न मिल्छ ।
फोटोहरु अपडेट ट्याबमा आउनेछ । त्यहीसँगै अब गूगल म्याप्समा कुनै छुट्टिएको रोड छ भने त्यसलाई साइड मेन्यूमा थिचेर एडिट गर्न सकिन्छ ।
गुगल म्याप्सलाई सम्पादन गर्ने तरीका बारेमा डायरेक्टर अफ प्रोडक्ट, केभिन रीसले जानकारी दिएका छन् ।
रीसले भने कि प्रयोगकर्ताहरूले म्याप्समा कुनै बन्द सडकहरूको विवरणबारे बताउन सक्षम हुनेछन्। उदाहरणका लागि, सडक कति लामो समयसम्म बन्द हुन्छ ? बन्द हुनुको कारण के हो ? अब नयाँ रुट के हो? यो प्रयोगकर्ताले दिएको सुझाव र सम्पादन सही छ भनेर सुनिश्चित गर्न यसका लागि प्रयोगकर्ताको योगदान पनि देखाइनेछ।
गुगल म्याप्सको सहायताले तपाईँले यो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईको बच्चा स्कूलबाट घर पुगेको छ कि छैन् ? यसको लागि, फोनमा गुगल म्याप्स डाउनलोड गरेर, तपाईं तपाईंको साथीहरू वा परिवारका सदस्यलाई रियल टाइम लोकेसन अन गर्नका लागि सोध्न सक्नुहुन्छ। यस पछि, दुबै तपाईं र तिनीहरूले एक अर्काको लोकेसन ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ।
सामसुंग ग्यालेक्सी एस सेभेनमा नयाँ चीपसेट हुने, मिडिया टेकको चीपसेटमा एस सेभेन परिक्षण
सेल्सफोर्स डटकमले वर्कप्लेस एप स्ल्याकलाई २७.७ अर्ब डलरमा किन्यो